Samsung Galaxy Note 7 Review - News Fitsipika
Ny Samsung Galaxy Note 7 dia, tsy isalasalana, ny tsara indrindra phablet mandeha. Tena mahery vaika, feno ny ilaina endri-javatra sy ny kely indrindra amin'ny lalan'ny gimmicks, ary manome vokatra fitaovana tsotra izao ny hafa tsy.
Ny tsara indrindra dia izao phablet handeha tantera-drano, amin'ny mamirapiratra curved efijery, tsara kokoa penina sy ny famoretana fakan-tsary, mifono ao ny tery, Premium vatana
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Samsung Galaxy Note 7 famerenana: ny mpanjakan 'ny phablets miverina” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy 25 Aogositra 2016 06.00 UTC
The Galaxy Note 7 dia ny fiverenana any amin'ny UK ny Samsung ny mpanjakan'ny ny penina-ampy fitaovana phablets, fa tsy misy olona tena te ny penina intsony?
Na dia ny valiny hoe "tsia" ary tsy mikasika ny "S Pen", ny Note 7 manolotra zavatra hafa. Izany no iray amin'ireo finday voalohany na inona na inona habeny fa afaka hamaha mpampiasa mampiasa ny masony tamin'ny naorina-in infrared Iris scanner.
Curved aloha sy miverina
Samy ny anoloany sy ny indray dia curved amin'ny sisiny, hampisy ny tery fitaovana, na dia eo aza ny lamba fanakonana ny 5.7in diagonal lafiny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny Note 7 dia ny rora sarin'ilay Galaxy S7 Edge. A curved efijery bends nidina nankany amin'ny lafiny roa sy ny fitaratra indray no boribory ao mitovy lamaody eny aloha. Misy vy kely tarika manodidina ny ivelany. Side-by-lafiny maha samy hafa ny hany mazava dia ny Note 7 dia tena kely lehibe kokoa.
Izany 7.9mm matevina, 153.5MM lava sy 73.9mm ny sakany. Ny S7 Edge dia 0.2mm thinner, 2.6MM fohy ary 1.3mm teritery kokoa. ny Note 7 koa 12g mavesatra amin'ny 169g, miaraka amin'ny penina niantsona. Ny fahasamihafana dia tsinontsinona ampiasaina, izay mahatonga ny Note 7 iray amin'ireo lehibe mora indrindra hampiasa finday, ary mahatonga ny lohan'ny mpifanandrina, ny Apple iPhone 6S Plus sy Rohy 6P, jereo tsara matavy amin'ny lafiny rehetra bara saika hatevin'ny – ny iPhone sy ny Rohy Samy 7.3mm matevina.
Ny curved sisin'ny lamba kokoa noho ny asany hatsarana, fa hanampy ny hihazona ny sakany tery izay mahatonga mihazona ny Note 7 dia mora kokoa noho ny efa ho hafa phablet. Faly erỳ teny an-tànan'i, amin'ny haavon'ny fanatsarana eo amin'ny sisiny, fitaovana sy ny endriky mihoatra noho teo aloha rehetra Note.
Ny 5.7in QUAD HD AMOLED lamba dia iray amin'ireo mamiratra, mazava sy tsara indrindra hatramin'izay aho nahita tamin'ny smartphone, amin'ny inky mainty hoditra sy feno fahasahiana loko. Tena mazava tsara hita any an-tokotany, izay miavaka ho an'ny matetika no mora nanasa avy OLED-monina efijery, ary na dia tsara lavitra noho izay mendrika ny efa tsara S7 Edge.
ny Note 7 koa tantera-drano ny IP68 fitsipika izay midika hoe 1.5m for 30 minitra amin'ny rano madio. Ny port dia misokatra, izany hoe tsy misy fiddly varavarana, anisan'izany ny penina sy ny S slot Pen, izay afaka miasa anaty rano teo amin'ny efijery koa.
Processor: octa-fototra Samsung Exynos 8890 na QUAD-fototra Qualcomm Snapdragon 820
RAM: 4GB ny RAM
Storage: 64GB + microSD karatra
Rafitra fikirakirana: Android 6.0.1 amin'ny TouchWiz
Camera: 12MP aoriana fakan-tsary amin'ny OIS, 5MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: LTE, Wifi, NFC, USB-C, Wireless fa mamaly ny, Bluetooth 4.2 ary ny GPS
Wireless fa mamaly ary indray andro any ny bateria
Ny manga sy volamena Note 7 Tena tsara tarehy amin'ny nofo. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny Note 7 manana processeur mitovy, sary sy ny habetsaky ny RAM tahaka ny S7 Edge ary manao toy izany koa.
Toy ny S7 Edge, ny Note 7 dia snappy ary haingana crunches amin'ny alalan'ny tsara tarehy be ianao na inona na inona mety hitoraka azy. Tsy mahatsapa sprightly indrindra Loading sy ara eo amin'ny fandaharana. Split-efijery multitasking Tsy mba ela ihany koa no azy;, na ny ilàna izany amin'ny 5.7in efijery dia debatable.
Battery fiainana kely mandiso fanantenana. ny Note 7 fiampangana tena mafy, mikapoka 70% amin'ny 50 minitra alalan'ny tafiditra USB-C haingana dovia, fa ny bateria dia tsy haharitra mihoatra lavitra noho ny isan'andro tsy fitsaboana manokana.
Mampiasa izany ho toy ny fitaovana voalohany indrindra, mihaino ny dimy ora ny mozika alalan'ny Bluetooth écouteur, Browsing sy mampiasa fampiharana nandritra ny telo ora an-jatony ny hanoto mailaka sy 30 minitra ny mazava lalao, ny Note 7 naharitra hatramin'ny 7am amin'ny andro voalohany amin'ny andro mandra-8am roa.
Wireless fa mamaly ny niasa tsara tampoka amin'ny 5W pad naorina ho tapa-fanaka. Battery-mamonjy fomba, anisan'izany ireo izay manara-maso ny fampiharana ka nataony ireo izay tsy mampiasa ny hatory mba hanakanana azy ireo mampiasa fahefana, dia naorina tany, ary hitako bateria fiainana mba miadana kokoa toy ny dingana nanakodia teny.
Tena Tsara homarihina ihany koa fa ny fiainana bateria no antenaina mba hampitombo ny manodidina 10%-20% miaraka amin'ny manakodiava amin'ny Android 7.0 Nougat.
ny fampiharana, ny olona sy ny asa sisin'ny tsary nivoaka avy paompy kely amin'ny lafiny ny curved efijery. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny Note 7 mitantana izany farany dikan- Android 6.0 Marshmallow antsoina hoe TouchWiz tahaka ny S7 Edge, fa amin'ny fanampiny mba hanohanana ny penina.
Ankamaroan'ny Samsung ny fanovana ny Android tsara, indrindra toy ny Android 6.0 Marshmallow dia izao avy ny daty. Manana haingana kokoa ny toe-javatra, fahefana bebe kokoa-mamonjy fomba anisan'izany ny rafitra mba hamantarana ka nataony fampiharana maromaro mba hatory, fanaraha-maso be dia be ny fampahatsiahivana ao anatin'izany ny herin 'ny hovitrovitra, ary ny naorina-in manga mazava sivana ny alina fampiasana.
Ny kely output peo toe-javatra ao amin'ny fampahafantarana aloky mamela anao mifamadika avoakany eo amin'ny fitaovana isan-karazany Bluetooth, écouteur sy ny anatiny fitenenana, nefa tsy hitsaharana na inona na inona.
Nisy famoriam-bola ny sisiny kely Asa vaventy dia hita, ilaina haingana ny fahazoana ny fifandraisana na fampiharana, fa kely kosa mihoatra noho izany. Azo esorina raha tsy nahita azy mahasoa. Samsung ny lalao fitaovana an-tsoratra dia afaka lalao sary, hampitsahatra fampahatsiahivana na ny bokotra avy amin'ny manakorontana milalao ary afaka mametra ny finday avo lenta ny fampisehoana mba hamonjy bateria fahefana. Afaka manamaivana ny lalao tsy misy fiatoana izany koa.
Tsy ny tsara fanahy rehetra, na izany aza. Ny vaovao ara-tsosialy Upday fanangonan-tontonana ny homescreen (izay nisolo Flipboard amin'ny Samsung aloha finday) I nahita mahasosotra Dia nihodina aho izany eny. Izaho koa aza efa nijaly ny bibikely amin'ny Samsung vaovao handrindra Cloud fanompoana, izay lamosiny ny telefaonina ny anatiny ny Samsung ny maimaim-poana 15GB rahona fitehirizana, izay nahatonga ny haino aman-jery Android lohamilina fanompoana mba haingana tatatra ny bateria.
Media mpizara bibikely Fahita amin'ny Samsung finday avo lenta, matetika mifandray amin'ny sary mpanao kolikoly indrindra eo amin'ny karatra SD, na dia tsy amin'ity tranga ity raha tsy manana karatra microSD nametraka tamin'ny fotoana. Nitodika eny Samsung syncing rahona no hany vahaolana ho tatatra ny bateria hitako. Izany dia azo inoana fa ny vokatry ny fampiasana ny fitaovana famoahana mialoha; dia tonga maro fanavaozam-baovao amin'ny fotoana niarahako nanana izany.
Microsoft ny Office, Skype sy ny OneDrive fampiharana tonga mialoha nametraka, izay azo vonoina fa tsy uninstalled.
Manoratra-tsoratra fohy raha ny varavarana lamba dia eny no tena mora raisina ho toy ny post-nomerika izany naoty. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny sisa Samsung ny rindrankajy tweaks ho Android dia mba hanohanana ny S Pen penina, Izay no iray amin'ireo tsara indrindra styluses kely misy. Ny tsindry-mora nib dia be noho ny teo aloha kely dikan-, izay mahatonga azy hahatsapa kokoa ny marina, raha ny rafitra iray manontolo dia tena manaiky raha mbola ianao fampiharana mampiasa ny Samsung.
Fampiasana ny penina in Evernote, ohatra, kely ny haingana toy dia voamarika fa ny mihevitra teo amin'ny efijery ihany koa ny fanaovana izany zavatra izany nihatsara kokoa toy ny mpitan-amin'ny taratasy.
Fanamarihana vaovao Samsung ny fampiharana ny ankamaroan'ny miara-manangona ny penina endri-javatra amin'ny toerana iray. Hand-voatsoaka Fanamarihana, lahatsoratra, sora-tanana fankatoavana, peo sy ny sary azo dia nandahatra sy synced amin'ny Samsung Cloud, fa tsy mampalahelo toy ny Samsung Evernote ny be taona S Notes.
Afaka mampiasa ny penina mba hanao haingana voafantina-dahatsoratra ho an'ny fandikan-teny, lamba annotations ary mampiasa ny mafy orina fanangonana ny vokatra fitaovana. Ny S Pen miasa teo amin'ny efijery ny telefaonina rehefa matory, izay voavonjy ny Samsung Notes ary azo mipaingotra eo amin'ny lamba toy ny post-ny naoty.
Rehetra ny penina ny endri-javatra azo ampiasaina koa, raha ny varavarana lamba dia lenan'ny, izay midika fa azo ampiasaina anaty rano, Raha tena tianao. Ary raha tsy mampiasa ny penina seranan-tsambon'i Kendreo ho any an-telefaonina.
Ny penina dia tena ilaina ho an'ny mpitan-kely kisary, sketches na ny sora-tànana-tsoratra, fa tsy mihoatra lavitra noho izay. Fa iray ihany no manana endri-javatra vaovao namono: vetivety GIF kevitra. Azonao atao an-tsoratra ny faritra ny efijery mba hanao GIF ny ho any 15 segondra.
Ny tondro scanner toy ny trano avo roa heny ny bokotra, ny USB-C seranan-tsambo – voalohany ho Samsung finday – avy hatrany ambany izany. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny tondro scanner eo anoloana dia mitovy tahaka ny Galaxy S7 Edge ary mafy, manaiky ny rantsan-tànany sy ny ankihiben-tànany avy hatrany ny ankamaroan 'ny fotoana. Ho fiarovana ihany koa ny fampiharana, fividianana sy ny tenimiafina, toy ny hafa rehetra Android Marshmallow na tatỳ aoriana fitaovana.
Jereo ny masoko. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny Note 7 dia iray amin'ireo voalohany finday avo lenta mba manasongadina Iris scanning, izay mampiasa ny infrared fakan-tsary mba tsoratra ary avy eo dia mifanaraka ny fomba tsy manam-paharoa ny irises. Ho mitovy izany na na roa ny masonao, ary miasa tsara, mamoha ny telefaonina na ny fanamarinana tsy azo lavina zavatra ao anatin'ny iray segondra.
Tsy maintsy hahatsangana azy ny maso haavon'ny fa ny reliably miasa, fa izany dia manaiky aho na dia amin 'ny eny-afovoany tsara jerena amin'ny avo. Tsy manao solomaso na mampiasa fifandraisana Mitovy amin'ilay family mbola.
Tsy tahaka ny mety tahaka ny tondro scanner, ary mitaky ny swipe niakatra teo amin'ny efijery hampavitrika, fa asa raha ny tananao na ny tondro scanner dia nanarona, izay tena ilaina ho amin'ny ririnina.
Ny 12-megapixel fakan-tsary eo amin'ny indray no Optical sary stabilization sy haingana autofocus, ary koa ny fifadian-kanina family, manao ny ankamaroan'ny ambany-hazavana sary. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny Note 7 manana ny mitovy indray aloha sy ny fakan-tsary ho toy ny Galaxy S7 Edge, izay ny sasany amin'ireo tsara indrindra hita ao amin'ny smartphone.
Ny aoriana fakan-tsary 12-megapixel dia fifadian-kanina, lehibe amin'ny ambany-hazavana ary mahatonga azy sarotra ny haka ny mahantra sary. Afaka maka sary ny manta ihany koa. Anoloana-miatrika 5-megapixel selfie fakan-tsary tsara, fa tsy ampy tsara tsipiriany, namokatra malemy tarehy sary fa mety hahita bebe kokoa ny sasany mandrobo.
Ny foana-on fampisehoana afaka manome ny famantaranandro sy ny fampahatsiahivana, ary koa ny hamaky-avy amin'ny zava-milalao avy Spotify na fampiharana mozika hafa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny fitaratra indray no mahagaga ambaratonga ambony ny friction, izay mahatonga azy mora kokoa ny mitazona ny, fa koa mahatonga azy ho tondro andriamby
Misy fo mitempo sensor ao ambadika fa zara raha misy no mampiasa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana, fa azo ampiasaina ho toy ny fakan-tsary selfie trigger
Afaka misoratra anarana ihany efatra ny dian-tanana teo amin'ny scanner
Ny foana-on maneho mampiseho ny fotoana, daty, kalandrie na sary, arakaraka ny toe-javatra, ary azo voalahatra hitodika amin'ny na eny anelanelan'ny ora napetraka mba tsy hiaro anao izy amin'ny alina, na lasa hiala tanteraka
Ny foana-on miseho (izay nanana ny bateria nitodika mavitrika fitiliana) levona manodidina 10-15% ny bateria fiainana isan'andro
ny Note 7 nanana ny matanjaka famantarana na finday avo lenta pitsapana aho, fa nijaly bateria tatatra ka nahazo mafana ao amin'ny tambajotra be mponina fepetra ny London lamasinina
Ny Samsung Galaxy Note 7 vidin'ny £ 700, ary tsy ampy amin'ny telo loko: mainty, manga-bolamena lafiny, ary volafotsy.
Fa raha oharina, ny 5.5in Galaxy S7 Edge ny vidin'ny £ 639, ny 5.7in Google Rohy 6P ny vidin'ny £ 449 (64GB no £ 499) ary ny 5.5ao amin'ny Apple ny vidin'ny iPhone 6S Plus £ 619 (64GB no £ 699), izay mahatonga ny Note 7 momba izany vidiny ho ambony-end mpifanandrina.
Ny S Pen dia zavatra mety tsy hampiasa ny fotoana, fa tonga ao amin'ny tena mora raisina, fara fahakeliny, indray mandeha isan'andro ho ahy, ary rehefa tsy ao amin'ny seranan-tsambon'i fampiasana soa aman-tsara ny lalana, tsy manakivy avy amin'ny hatsarana na ny asa ny ny telefaonina.
ny fakan-tsary, tondro scanner, Wireless fa mamaly ny, tsy tantera-drano sy ny varavarana lamba dia ambony ihany koa ny notch. Toy izany ny mety, hahavita sy hahatsapa ny fitaovana. Ny Iris scanner dia zava-baovao izay mety ho ilaina bebe kokoa, rehefa ririnina mikodiadia miaraka. Saingy ny curved bezels sisiny sy ny kiritika kely manodidina ny varavarana lamba izay ny Note 7 ny tsara indrindra kely.
Manao tena lehibe loatra finday tsy mahatsapa loatra lehibe mihazona – izany kokoa noho ny hafa manageable 5.7in phablet tsy namono zavatra hatao fanatitra efijery Real Estate.
Ny hany tena lafy ratsiny, izay efa toy izany koa ho an'ny tsirairay ny Note Samsung andian-dahatsoratra Nanomboka manodidina Aogositra, dia ny rindrambaiko intsony ho amin'ny daty. Android 7.0 Nougat dia be kokoa ny fampahatsiahivana sy ny bateria fiainana. ny Note 7 dia hahazo ny fanavaozam-baovao ho Nougat, fa raha tsy fantatra.
Mahatsara: tsy tantera-drano, curved efijery sy miverina, tondro scanner, Iris scanner, Wireless fa mamaly ny, microSD karatra slot, S Pen, mamirapiratra fampisehoana, lehibe fakan-tsary
Maharatsy ny mifampiresaka: tsy mbola Android 7 Nougat, andro iray ihany ny bateria, lafo
Ny S Pen slots ho ao an-ambany ny telefaonina tamin'ny hanoto-bokotra Click. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Samsung Galaxy S7 Edge famerenana: izany dia ny finday avo lenta ho nikapoka
Google Rohy 6P famerenana: ny tsara indrindra phablet misy
iPhone 6S Plus famerenana: zara raha tsara noho ny iPhone 6 Bebe Kokoa
Samsung Galaxy S6 Edge + famerenana: ny curvy 'iPhone 6 More mpamono olona '
Article, Gadgets, Finday, Phablets, Famerenana, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia
← Android 7.0 Nougat Review Apple Manambara tantera-drano iPhone 7 →